iOS 11.2 Beta 6 Ikozvino Inowanikwa kune Vanogadzira uye Veruzhinji Beta | IPhone nhau
iOS 11.2 Beta 6 Ikozvino Inowanikwa kune Vanogadzira uye Veruzhinji Beta
Apple ichangobva kuburitsa yechitanhatu Beta yeIOS 11.2, inotevera inovandudza iyo ichakurumidza kuwanikwa kune vese vashandisi ve iPhone ne iPad vane zvishandiso zvinoenderana. Iyi Beta 6 inowanikwa panguva imwe chete kune vanogadzira uye nevashandisi vakanyoreswa muPublic Beta chirongwa, uye zvichipesana nezvakaitika neBeta 5, iyo ingangoita mu iPhone X yaingotora mashoma megabytes, iyi Beta 6 iri 2,2GB muhukuru zvichiratidza kuti zvinokwanisika kuti vhezheni yacho ndeyekudonha.
Parizvino isu hatisi kukoshesa shanduko tichienzanisa neBasas yapfuura, kunyangwe tichiramba tichiedza iyi vhezheni itsva pane edu zvishandiso. iOS 11.2 inosanganisira mashoma ekuvandudza uye maficha matsva, kuwedzera kune ramba uchitsvaga kugadzirisa mashandiro uye kuzvitonga kuzere kunyanya kumidziyo yekare, iyo yakakanganiswa zvakanyanya nekusunungurwa kweIOS 11. Iyo rondedzero yeshanduko muIOS 11.2 inoratidzwa pazasi.
Iwo matsva mapikicha emifananidzo ePhones nyowani akaisirwa mune ese mamodheru
Nyowani nyowani yehupenyu skrini inongoitirwa chete iPhone X
Pane zviratidzo zveAirPlay 2, iyo nyowani isina waya data yekufambisa protocol iyo ichatanga munguva pfupi, pamwe nekutanga kwePambaPod.
Yakagadziriswa Calculator nyaya inokonzeresa kupfuura zvimiro zvakajairwa
Apple Bhadhara Cash mu beta (US chete)
Sarudzo nyowani dzekunyorera kunyorera
Ruzivo nezve hunhu hwemabhatani ekumisikidza nekumisa WiFi neBluetooth kubva kuControl Center
Itsva chiratidzo cheControl Center kubva pakakiya skrini
Yekukurumidza isina waya kuchaja ine 7,5W majaja e iPhone 8, 8 Plus uye X
Ichakamirira apo Meseji ichaonekwa muICloud, sarudzo yakaziviswa neApple kuWWDC uye kuti izvozvi isu tichakamirira. Chero imwe nhau yatinowana isu tinokuudza iwe nekukurumidza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 Beta 6 Ikozvino Inowanikwa kune Vanogadzira uye Veruzhinji Beta
Taylor Swift, ikozvino ane yake yazvino dambarefu rinowanikwa paApple Music